DF “Dilkii Cali Jabal wuxuu wiiqayaa falalka ay Shabaab shacabka ku u gaarsanayaan” - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > DF “Dilkii Cali Jabal wuxuu wiiqayaa falalka ay Shabaab shacabka ku u gaarsanayaan”
August 4, 2017 August 4, 2017 Saadaq Laki273
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in Dilkii Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) oo lagu dilly weerarkii 30-kii July 2017 inay wiiqeyso falalka ay Al-shabaab shacabka ku ugaarsanayaan.
Cali Jabal waxuu ka mid ahaa saraakiisha sare ee Al-Shabaab, waxuuna mas’uul uga ahaa caasimada Muqdisho oo uu ka danbeeyey falalkii Al-shabaab ku beegsanayeen shacabka Soomaaliyeed, sida ay Dowladdu sheegtay.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in uu guul ku soo dhammaaday weerarkii lagu beegsanayey Cali Jabal, kaasi oo ka dhacay agagaarka Toorotoorow ee gobolka Shabeelaha Hoose, iyada oo sidoo kale u mahadcelisay wadashaqeynta dhow ee dalalka saaxiibada oo ka wada shaqeeya sidii Al-shabaab looga sifeyn lahaa dalka oo dhan.
“Sababta ay Dowladu u xoojineyso dagaalka lagula jira kooxaha argagaxisada ayaa ah sidii loo wiiqi lahaa inay shacabka u soo maleegaan walxaha qarxa oo loo diido waqti ay ku nastaan, Weerarada noocan ah waa kuwo sii soconaya, waxaana u habboon in kooxahaas ay is soo dhiibaan oo ay nabada qaataan, dilka Cali Jabal ayaa ku yimid wadashaqeyn iyo bartilmaameysi mudo lagu ugaarsanayey oo tuseysa kuwa isaga oo kale ah inaysan marnaba fakaneynin oo dariiqa kaliya ee u furan uu yahay inay Dowlada isu soo dhiibaan”. Waxaa sidaas lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya.
Dowladda Federaalka ayaa ugu dambeyn sheegtay in ay ka go’an tahay sidii loo badbaadin lahaa shacabka islamarkaasna loo sugi lahaa amniga iyo nabadeynta, si shacabka ay u helaan neecow nabdeed oo ay uga qeyb qaadan karaan horumarka dalkooda iyagoon ka wal waleynin qaraxyada Shabaab.